MYU SHADAN: January 2014
ခုချိန်ထိ တော်တော်များများသော anti virus user များဟာ Kaspersky 2013 ကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ အသုံးပြုနေကြဆဲပါဘဲ။ 2014 ကို သုံးတဲ့အခါမှာ key ထည့်ရတာ အဆင်မပြေမှု့ကြောင့် 2013 ကိုပဲ သုံးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တင်ပေးတဲ့အခါ ၂၀၁၄ အတွက် ထည့်ရမယ့် activation code ကို တင်ပေးထားပါတယ်။ သုံးချင်တဲ့သူများအတွက်ပါ။ ကျနော်ကတော့ ခုချိန်ထိ 2013 ကိုပဲ key ထည့်ပြီး သုံးနေဆဲပါပဲ။ လိုချင်တဲ့သူများအတွက် အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ key ကိုတော့ ဒီမှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Download KIS 2013 (Google Drive)
Download KIS 2014 (Google Drive)
Posted by myu shadan at 11:08 AM No comments:
Win7Ultimate May 2013 x 64 bit (နောက်ဆုံထွက် update version)
ဒါကတော့ Win7Ultimate အတွက် 64 bit ပါတဲ့ iso ဖိုင်ပါ။. လိုချင်တဲ့သူများ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ 200MB စီ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒီဖိုင်တွေကို win rar နဲ့ ဖိုင်ပြန်ဖြေရမှာပါ။ လုပ်နည်း ရေးပေး ထားပြီးသားပါ။ ဖိုင်ဖြေနည်းကို ရေးပေးထား ပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ လည်း ရေးပေးပါဦးမယ်။ Download လုပ်မည့်သူများ သိစေချင်တာ တစ်ခု ပြောပြပါဦးမယ် File တွေကို Download လုပ်တဲ့ နေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ Download with IDM ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Download လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် auto download link ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ကဲအားလုံးပဲ အောက်မှာ Direct Link ကနေ နေ Direct နှိပ်ပြီးတော့ Download လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။ Link မသေတော့အောင် Google Drive ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်။
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | Part12 | Part13 | Part14 | Part15 | Part16 | Part17 | Part18 | Part19
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ရန်နိုးဆော်သည့် ဆိုင်းဘုတ်အား မနောကွင်းရှေ့ စိုက်ထူ
(၆၆) နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့တွင် “ဤမြစ်ဆုံအလှသည် ကမ္ဘာတည်သရွှေ့ လှပနိုင်ပါစေ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြပါစို့” ဆိုသည့် စာတန်းပါသည့် ဆိုင်းဘုတ်အား မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ မနောကွင်းရှေ့တွင် ဒေသခံ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို မလိုလားသူများစုပေါင်းပြီး စိုက်ထိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(၆၆) နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့တွင် (၂၀၁၅)အထိ ရပ်ဆိုင်းထားသည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား နောက်အစိုးရ လက်ထက်တွင်လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှု မပြုဖို့ အတွက် ပြည်သူများအားလုံး ပူပေါင်းတားမြစ်ရန် နိုးဆော်သည့် အနေနှင့် စိုက်ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“၆၆ နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသည့် အနေနှင့် အရန်းလှပတဲ့ မြစ်ဆုံပုံကို ကျွန်တော်တို့ ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ မြစ်ဆုံကို အလုံးဝိုင်းပြီး ကန့်ကွက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အခုလို ဆိုင်းဘုတ် ထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ’ဟု ဖာသာနော်ဒင့်ကဆိုသည်။
CPI အနေနဲ့ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ဆန္ဒပြသည့် အထိ ပြုလုပ်ဖြစ်ကြောင်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြန်လုပ်ခွင့်ပြုမည့် သူလဲ နောက်နောင်လည်း မရှိတော့ဘူးလို့ ယုံကြည်ထားကြောင်း ဖာသာနော်ဒင့်မှ ဆက်လက်ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများ ကိုမြအေးတို့အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ မဒီယာ ဟိုတယ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ နေ့တွင်တွေ့ဆုံစဉ်လည်း ၂၀၁၅ အကုန်ပြန်လည် ထွက်ပေါ်လာမည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ဆက်လက်ကန့်ကွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး နည်းလမ်းရှာရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
(၆၆) နှစ်မြောက်ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားအား မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်လူငယ်များမှ အခမ်းအနားများ အသီးသီးကျင်းပခဲ့ကြသည်။
Posted by myu shadan at 10:56 AM No comments:
Posted by myu shadan at 10:45 AM No comments:
ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော် ဘာတွေပြောလဲ ။။ အချိန်ပေးပြီး နားထောင်စေချင်တယ်
Posted by myu shadan at 11:57 PM No comments:
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မူစယ်မြို့၌ ကျင်းပသည့် ကျားဖြူပါတီ ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့၌ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ သျှမ်းပြည်နယ်နေ့အား သျှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ၏ တရားဝင် ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မူစယ်မြို့၌ သုံးရက်ကြာကျင်းပသည့်ကျားဖြူပါတီ တတိယ အကြိမ်ညီလာခံမှ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော် ပေါ်ပေါက်ရေး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ သျှမ်းပြည်သားများအားလုံး အိမ်ထောင်စုဇာယား နှင့် နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကဒ် ရရှိရေး၊ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဖမ်းထားသည့် သူများအားလုံး လွှတ်ပေး ရေး၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရွေးခံ၍ လွှတ်တော်လမ်းကြောင်းမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ သျှမ်းပြည်နယ်နေ့အားရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရေး နှင့် တိုင်းရင်းသားကျောင်းသားကျောင်းသူများ တပတ်လျှင် ၃ ရက် မိမိရိုးရာဝတ်စုံဖြင့် ကျောင်းတက်နိုင် ရေး တို့ ပါဝင်သည့် အချက် ၇ ချက်အား ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အပြင် ပါတီညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက် အများအပြားထဲမှ - ဘယ်အကြောင်း ကြောင့်မဆို ကျားဖြူပါတီ ဖျက်သိမ်းမည်မဟုတ်၊ တာချီလိတ်ညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ညီညွတ် သော သျှမ်းတိုင်း ရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ United Shan Political Parties ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ဆက် လက် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် စသဖြင့်ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်ဟု ကျားဖြူပါတီ ပြည်နယ် လွှတ်တော် အမတ် စိုင်းသူရိန်ဦး ကပြောသည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူစယ်မြို့၌ ကျင်းပသည့် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP ခေါ် ကျားဖြူပါတီ၏ တတိယ အကြိမ် ညီလာခံ အား ပြည်ထောင်စုတဝှမ်းလုံးမှ ကျားဖြူပါတီဝင် ၁၈၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကို ပေါ့ပေါ့ဆဆမတွေးပဲ သေချာ
တွေးစေချင်ပါတယ် ။ ပြီးရင် ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာတွေကိုလည်း ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးစေချင်ပါတယ် ။ အရင်ဆုံး စမ်းသပ်ချက်လေး
တစ်ခုကို ပြော ဖို့လိုပါ တယ် ။ စမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်
သင့်ဆီမှာ မိုဘိုင်းဖုန်း ၂ လုံးနဲ့ ကြက်ဥ သို့မဟုတ် ဘဲဥ တစ်လုံးရှိရပါမယ် ။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဖုန်းနှစ်လုံးအလယ်မှာ ဥ ကိုထားပြီး
နေရာချထားလိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ် သလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင် ။
ကဲ နေရာချထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းနှစ်လုံးကို ဆက်သွယ်မှု ( Call ) ကို စတင်လိုက်ပါ ပြီးရင် ၆၅ မိနစ်အထိ ထားပါ မယ် ။
ပထမဆုံး ၁၅ မိနစ်မှာတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး ။
၂၅ မိနစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဥ ဟာ ပူစ ပြုလာပါပြီ ။
အလွန်ကို အန္တရာယ်များပါတယ် ။ Nerve လို့ခေါ်တဲ့ အာရုံကြောတွေ ပျက်ဆီးနိုင်သလို မှတ်ဥာဏ်ပိုင်းဆိုရင်ရာ စနစ်တွေ ဟာလည်း radiation တွေကြောင့် ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းတွေကထုတ်တဲ့ အသံ လှိုင်းတွေဟာ လိပ်ပြာတွေကို သေစေနိုင်ပါသတဲ့ ။
ကဲ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဖုန်းပြောမှု ကြာချိန် ကို လျော့ ချကြရအောင်လား ။ တတ်နိုင်သမျှ လိုအပ်သလောက်ပဲပြောဆိုကြပါစို့ ။
ဒီ မက်ဆေ့လေးကိုလည်း သင် ချစ်သော သူငယ်ချင်း နဲ့ ညီအကို မောင်နှမများကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါ ။
လာက်ဖုန်းပြောရင် ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ ။
အလွန်ကို အန္တရာယ်များပါတယ် ။
Nerve လို့ခေါ်တဲ့ အာရုံကြောတွေ ပျက်ဆီးနိုင်သလို မှတ်ဥာဏ်ပိုင်းဆိုရင်ရာ စနစ်တွေ ဟာလည်း radiation တွေကြောင့် ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် ။
Posted by myu shadan at 11:02 PM No comments:
Posted by myu shadan at 10:53 PM No comments:
နိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်ထားရာတွင် မည်သည့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်စေ နီးစပ်ရာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ရုံးများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ရုံးခွဲ ၁၅ ခုတွင် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းတို့မှာ မကွေး၊ မြစ်ကြီးနား၊ လွိုင်ကော်၊ ဟားခါး၊ ဘားအံ၊ မော်လမြိုင်၊ စစ်တွေ၊ ထားဝယ်၊ ပဲခူး၊ တောင်ကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပုသိမ်၊ လားရှိုး၊ ကျိုင်းတုံ၊ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့များ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်ထားမှုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ပုံစံ ၁၇၊ ၁၉ နှင့် ပညာရေး ကင်းရှင်းကြောင်း လျော်ကြေးထောက်ခံချက်များ ဖြေလျော့ ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by myu shadan at 10:01 PM No comments:
ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က သင်းထောက်ဆရာတဦးထံမှ မြေသိမ်းသည့်အပြင် ရုိုက်နှက်ထိုးကြိတ်
လဆန်အောင်ဝါ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှ ဗိုလ်ကြီး တဦးက ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် (KBC) အသင်းတော်မှ သင်းထောက် တဦး၏ လယ်ယာမြေကို သိမ်းယူရုံမက လူကိုလည်း ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ လယ်သိမ်းထားသည်ကို ပြန်တောင်းရာမှ ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်မှုခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သင်းထောက် ဦးလဆန်လရော် (Hpungtau Lasan La Raw) က KNG ကချင်သတင်းဌာန ကို ပြောပြသည်။ “တခါထဲ ခေါင်း မှာ ၆ ကြိမ်ကျော်ထိုးပြီး မျက်နှာတွေမှာလည်းထိုးတယ် ပါးရိုက်တယ် နင်ကဘာသင်းထောက်လဲ ဘာ KBC ဘာ နှစ်ခြင်း ဆိုပြီးထိုးကြိတ်တယ် သတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး။ ကျနော်လည်းအရမ်းနာတော့ ခေါင်းကအောက်ကျသွားချိန် ဝါးလုံးကြီးနဲ့ပြန်ရိုက်လာတယ် ဒီကောင်ကိုသတ်လိုက် ဖမ်းပြီး ကြိူးတုတ်လိုက် ဆိုပြီးအော်တယ်” ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံတဖက်ကမ်းရှိ သေးဝိုင် ငါဂျက်ယန်ရွာ (Te Wai Nga Jat Yang) ရှိ သင်းထောက်ဦးလဆန်လရော်၏ လယ်ယာကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဦးလဆန် အောင်ဝါ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့မှ သိမ်းယူကာ ပြန်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်ကို ဗိုလ်ကြီးဂမ်ဘားက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိုးကြိတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဦးလဆန်လရော်က ပြောသည်။ ထိုသို့ ဦးလဆန်လရော်သည် ထိုးနှက်ခြင်းခံရသော်လည်း ဗိုလ်ကြီးကို ပြန်ပြောခဲ့သည်ဆိုကာ တောင်းပန်ခိုင်းပြီး ပိုက်ဆံ ၂ သောင်းဖြင့် အသားဘူး သစ်သီးများဝယ်ကာ တောင်းပန်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ဖြစ်သည်နှင့် ချက်ခြင်း သေးဝိုင်ကျေးရွာ KBC ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ ဆရာဇော်ဂျာက ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ ဦးလဆန်အောင်ဝါအား ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရာ ဦးလဆန်အောင်ဝါမှ “ကျနော်က မသိတော့ဘူး ဆရာတို့ နင်တို့စိတ်နှိမ့်ချပြီးနေလိုက်ပေးပါ” ဟုသာပြောခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းရွာရှိမြေများသည် ရွှေထွက်သည့်နယ်မြေဖြစ်သောကြောင့် သိန်းချီတန်သည့် နယ်မြေဖြစ်သည်။ “ဥပဒေအရ လူတစ်ယောက်ကို နှိပ်စက်ဖို့ ခွင့်မရှိဘူး ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဥပဒေက ခွင့်မပြုထားဘူး ဒါမဲ့ သင်းထောက် တယောက်ကို လက်ထိတယ် သတ်မယ်ဆိုပြီးခြိမ်းခြောက်တယ်ဆိုတာ ဥပဒေချိုးဖောက်တာ ဟုတ်တယ်” ဟု ရှေ့နေ ဦးမာခါးက ပြောသည်။ ယခုချိန် သင်းထောက် ဦးလဆန်လရော်၏ လယ်ကွက်တွင် ဗမာလောပန်း တီတူးမှ ရွှေတူးဖော်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းဒေသရှိ ရွာသားများသည် မြေပြေစာများယူရန် ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် အာဏာပိုင်များကို ကြောက်ရွံ့ ခြင်းကြောင့် ပြေစာများမရှိသေးပေ။ ယခုလို ဦးလဆန်အောင်ဝါအဖွဲ့မှ လယ်ယာများမတရား သိမ်းခြင်းကိုပင် အစိုးရသို့ တရားဝင်ပြောရန် ကြောက်ရွံ့နေကြောင်းသိရသည်။ သေးဝိုင် ငါဂျက်ယန် (Te Wai Nga Jat Yang) ကို ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ရွာတည်ပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရင်း နေထိုင်ကာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၁၀ နှစ်ပြည့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲများပြုလုပ်ကာ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ခန့် ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပြည်သူ့စစ်လဆန်အောင်ဝါဖွဲ့သည် KIO အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ပြီးနောက် အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းပြီး လ၀ါယန်ဌာနေပြည်သူ့စစ်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းခဲ့သည့် တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ မိုင်းနားမုန်နာမှ အခြား နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ အသွင်ပြောင်းခဲ့သော NDA အဖွဲ့ လှုပ်ရှားရာ နယ်စပ်ထိ ကျေးရွာ ၄၀ ကျော်ရှိ နယ်မြေများတွင် လမ်းများဖောက်ကာ ရွှေတူးခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ၏ နယ်မြေများ ဆုံးနေရကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
Posted by myu shadan at 9:38 PM No comments:
ကချင်ပြည်တောင်ပိုင်း အစိုးရတပ်အချို့ နောက်တစ်ကြိမ်ဆုတ်ခွာ
ကချင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) က ပြောသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အထိအခုိုက် အဆုံးအရှုံးများခဲ့သည့် တပ်ရင်းမှူး ကျော်သူရ ဦးဆောင်သည့် ခလရ ၅၆ စစ်ကြောင်းသည် ယမန်နေ့ ညနေ၂ နာရီချိန်တွင် အခြေပြုရာ မုန်းဒိန်ပါရွာမှ တပ်ဆုတ်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယခုချိန် မုန်းဒိန်ပါရွာတွင် အစိုးရတပ် ခြေမြန်တပ်ရင်း ခမရ ၄၃၈ တပ်ဖွဲ့မှ စစ်အင်အား ၁၀၀ ကျော်ရှိနေ ဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဖမ်းဆီးထားသည့် သစ်များသယ်ယူပြီးလျှင် တပ်ဆုတ်သွားမည်ဟု ပြောကြောင်း သိရသည်။
Posted by myu shadan at 9:34 PM No comments:
Win7Ultimate May 2013 x 32 bit (နောက်ဆုံထွက် update version)
ဒါကတော့ Win7Ultimate အတွက် 32bit ပါတဲ့ iso ဖိုင်ပါ။. လိုချင်တဲ့သူများ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ 200MB စီ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ ဒီဖိုင်တွေကို win rar နဲ့ ဖိုင်ပြန်ဖြေရမှာပါ။ လုပ်နည်း ရေးပေး ထားပြီးသားပါ။ ဖိုင်ဖြေနည်းကို ရေးပေးထား ပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ လည်း ရေးပေးပါဦးမယ်။ Download လုပ်မည့်သူများ သိစေချင်တာ တစ်ခု ပြောပြပါဦးမယ် File တွေကို Download လုပ်တဲ့ နေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ Download with IDM ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Download လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် auto download link ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ကဲအားလုံးပဲ အောက်မှာ Direct Link ကနေ နေ Direct နှိပ်ပြီးတော့ Download လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။ Link မသေတော့အောင် Google Drive ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်။
Labels: IT Hpaji နည်းပည
ဒါကတော့ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ nero 12 ပါ။ ဘာတွေ လိုအပ်မလဲဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ပြထားပါတယ်။ window xp, vista, 7, 8 အားလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှု့ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး Ram 1GB ရှိရပါမယ်။ Hard drive space ကို သီးသန့်5gb အပိုရှိရပါမယ်။ တော်တော်လေးကို ကို nero က ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ အထဲမှာ video editing အတွက်ကော playerကော၊ burning software ကော Data back အတွက်ကော တော်တော် စုံစုံလင်လင်ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လိုချင်ရင်အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။ ကြိုက်တဲ့ Link ကနေသာ Download လုပ်ပါ။ ၂ နေရာ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးက နေရာက တစ်ဖိုင်ကို 200 MB စီ ခွဲတင်ပေးထားပြီးတော့ အောက်က 50 MB စီ ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ ကဲ ကြိုက်တဲ့ နေရာကသာ Download လုပ်ပါ။ အားလုံးကို (or) ခံထားတဲ့အတွက် ကြိုက်တဲ့ တစ်နေရာကနေ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Download Nero 12 (Google Drive) (200 MB Per File) (Win Rar ဖြင့် ဖိုင်ပြန်ပေါင်းပါ)
Download Nero 12 (Zippyshare) (50 MB Per File) (HJ split ဖြင့် ဖိုင်ပြန်ပေါင်းပါ)
Download Nero 12 (Mirrorcreator) (50 MB Per File) (HJ split ဖြင့် ဖိုင်ပြန်ပေါင်းပါ)
Download Nero 12 (China Server) (216 MB) (win rar ဖြင့် ဖိုင်ပြန်ဖြေပါ)
Posted by myu shadan at 9:24 PM No comments:
ဆမားဒူဝါ ဆင်ဝါးနောင်လေ၊ ပိုးကချင်တပ်ရင်း စုစုပေါင်း (၅)ရင်းအပြင်
ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ဂျပန်စစ်တပ်အကူနဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်မဖွဲ့ခင်တည်းက ကချင်တပ်ရင်းတွေရှိပြီးသား ပထမကမ္ဘာစစ်မှာတောင် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာ
အမှုထမ်းတဲ့ ကချင်တပ်ရင်းက ကချင်စစ်သား (၂၈၉)ယောက်
မက်ဆိုပိုတေးမီးယား (ယနေ့ အီရတ်) မှာသွားတိုက်ခဲ့သေးတယ်၊
တရုပ်ဖြူကျူးကျော်တုန်းကလည်း ကချင်တပ်ရင်းတွေ တိုက်ခဲ့သေးတာပဲ
ဗမာလူမျိုးနဲ့ ဗမာပြည်မက ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ချူပ်ဆိုခဲ့တဲ့
ပင်လုံစာချူပ်နဲ့ အောင်ဆန်း ဂတိတွေကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့လို့
(၁၀) နှစ်ကျော်ပြီး နောက် (၅) နှစ်ထိစောင့်လည်း ဘာမှမထူးလို့ တော်လှန်ရေးစတာဖြစ်တယ်
အောင်ဆန်းဘာကိုလိမ်တယ်ဆိုတယ် ကျူပ်ပြောထားတာ ဘယ်သူတယောက်ကမှလည်း ဖြေရှင်းချက်မပေးနိုင်ကြပါလား ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း၊ တောင်ပြော မြောက်ပြောပဲပြောနေကြတယ်၊
ထပ်ပြောမယ်နော်၊ အောင်ဆန်း အင်္ဂလန်ကို သွားတော့
ဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုများ တိုင်ပင်ခဲ့လည်း၊ အင်္ဂလန်
ရောက်တော့လည်း တိုင်းရင်းသားပြည်တွေကို ပိုင်ဆိုးပိုင်နှင်း
သွားတောင်းတာ ဘာသဘောလည်း၊ မရမှန်းသိတော့ ပြန်လာပြီး
မျက်နှာချိုသွေးနဲ့ ကချင်တွေစီအရင်လာပြီး ပြည်ထောင်စု
တည်ဆောက်ရအောင်တဲ့ ဒူဝါကြီးတို့ ကချင်ပြည်ကို
ဒူဝါကြီးတို့ ကိုယ်တိုင် အုပ်ချူပ်စေရပါမယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ဂတိ ဘယ်မှာလည်း
ကျူပ်တို့ ဗမာတွေကို အင်္ဂလိပ်က အုပ်ချူပ်တာမကြိုက်သလို
ခင်များတို့ ကချင်၊ ချင်း၊ သျှမ်းတွေကိုလည်း ကျူပ်တို့ ဗမာတွေ
လာအုပ်ချူပ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိ်ုတဲ့ ပင်လုံမှာပြောခဲ့တဲ့ ဂတိ
ဒီနေ့ ဘယ်ဗမာတယောက်ကများ လိုက်နာတာရှိလည်း
အောင်ဆန်းမရှိတော့လို့ဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့ ဆင်ခြေမဟုတ်ဘူး တာဝန်ယူမှု မရှိတဲ့လူတွေ ပေ့ါပျက်ပျက်ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်သွားမယ်၊ (Nan Da) ဆိုတဲ့ကောင်က ပေါချာချာတောတောပြောတတ်တာပဲ
သူမရှိတော့လို့ လား ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်ပေးမတုန်း""
ဘာကိုဆိုလိုခြင်တာလည်း နားမလည်ဘူး သူမရှိလည်း
လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား၊ ဘာကိုဆိုလိုတာလည်း မရှင်းဘူး
ကျူပ်တောက်လျှောက်ပြောနေတာကို ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှ မရှင်းနိုင်ပဲ၊ တောင်ပြော မြောက်ပြော ပြောနေတာ
စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ခင်များတို့ပြောတာကို ကျူပ်က
တုန့်ပြန်နိုင်ပေမဲ့ ဘယ်တယောက်ကမှ ကျူပ်ပြောတာ
(KNDO )အကြောင်းသိခြင်ရင် ကရင်တွေကို သွားမေးပါ၊ သူတို့က ကောင်းကောင်းရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဗိုလ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့
(BIA) တွေ ဂျပန်အဖေနဲ့ အတူဝင်လာတုန်းက
ကရင် အရပ်သူအရပ်သား တသောင်း တထောင်ကျော်ကို
အင်္ဂလိပ်သစ္စာခံတွေဆိုပြီး သတ်ပြစ်တာ ဘာဖြစ်လို့လည်း
ရဲဘောသုံးကျိပ်ထဲက ဗိုလ်မှူးချူပ်ကျော်ဇော်ကတော့ ကရင်တွေကို
တောင်းပန်ခဲ့လေရဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်မှာ သူကိုယ်တိုင်
ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ရင်းကနေ ကရင်အရပ်သူအရပ်သားတွေကို
သတ်ပြစ်တဲ့ အတွက် သူတောင်းပန်ခဲ့တာပါ၊ ဗိုလ်ချူပ်မြတို့ကတော့
ဗိုလ်အောင်ဆန်းကို ကျူပ်မြင်တဲ့ အမြင်အတိုင်းရေးတာ ဘာမှ ထွင်စရာမလိုဘူး၊
အောင်ဆန်းက သူပေးတဲ့ဂတိ နောင်ဆယ်နှစ်ကြာမှ သူအသက်ရှိသေးမှ
ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့ စကားပါ၊ အောင်ဆန်းဟာ ဗမာလူမျိုးနဲ့
ဗမာပြည်မကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောပြီးသား၊
လွတ်လပ်ရေးမရခင် သူသေသွားလည်း သူ့ကို ဗမာလူမျိုးတွေက
လွတ်လပ်ရေး ဖခင်လို့ ဘာကြောင့်ပြောနေရတာလည်း
ခင်များစကားကို ပြန်ကောက်ရင် သူဟာလွတ်လပ်ရေး ဖခင်မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ လွတ်လပ်ရေးမရခင်သူသေသွားပြီးပြီလေ၊ (လွတ်လပ်ရေးတော့ အတူယူခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးရတော့ အောင်ဆန်းတယောက်ပဲ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဖြစ်သွားတယ် တရားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာ) သူမရှိလည်း သူကိုယ်စားပြုခဲ့တဲ့
ဗမာလူမျိုးနဲ့ ဗမာပြည်မက သူ့ချူပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချူပ်၊ သူပြုခဲ့တဲ့ ဂတိကို ထိမ်းသိမ်း
လိုက်နာစောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လေ၊ ပြောထားတယ်
အောင်ဆန်းကလည်း ငါမပါရင် မင်းတို့တိုင်းရင်းသားတွေ
လွတ်လပ်ရေး မရဘူးလို့မပြောခဲ့ဘူး၊ လွတ်လပ်ရေး အတူယူရအောင်
လို့ပဲပြောခဲ့တာ၊ အင်္ဂလိပ်ကလည်း တောင်တန်းဒေသတွေကို (၁၀) နှစ်ကြာမှ လွတ်လပ်ရေးယူပါလို့ပြောခဲ့တာ (၁၀) နှစ်အတွင်းမှာ
အင်္ဂလိပ်စကားကို နားထောင်ခဲ့ရင် (၁၉၅၈)မှာ တောင်တန်းဒေသအားလုံး
ဗမာပြည်နဲ့ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့ အကျိုးကတော့ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကြီးပဲ၊ ကချင်ပြည်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများ တရုပ်လက်ထဲပါသွားပြီ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲလည်းပါသွားပြီ၊ နိဂုံးအနေနဲ့တော့ အောင်ဆန်းမရှိတော့လို့ဆိုရင် ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုဟာ အတုအယောင်ပေါ့ (လက်ရှိလည်း အတုပါပဲ၊ အစစ်ဖြစ်တို့
တိုင်းရင်းသားတွေကျိုးစားနေဆဲ၊ မရရင်တော့ ဗမာပြည်မ မပါတဲ့ သီးခြားတိုင်းရင်းသားများ ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ယုံပဲ)
by.. Lachid Kachin
Posted by myu shadan at 9:22 PM No comments:
Adobe Product နှင့် မကင်နိုင်တဲ့သူများအတွက် ရှိကိုရှိထားရမယ့် Crack နှင့် Patch စုစည်းမှု့
Adobe Product တွေနဲ့ မကင်းနိုင်တဲ့သူတွေ အားလုံး ခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ crack နဲ့ Patch ဖိုင်တွေကို ရှိကို ရှိထားသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုရင် ဥပမာ adobe Program တွေ ဖြစ်တဲ့ Adobe Indesign, Adobe Firework, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver စတဲ့ များပြားလှတဲ့ Adobe Product 27 မျိုးရဲ့ crack နဲ့ patch ဖိုင်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ crack ကတော့ သုံးတတ်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေမှာ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပြီးသားပါ။ ခု crack ဖိုင်ရှိထားရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ Serial number ခဏခဏ မတောင်းတော့ပါဘူး။ Host ထဲမှာတော့ Adobe ရဲ့ register URL link တွေကို သွားထည့်ပေးထားရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဒါဆိုရင် ဘာဆိုဘာပြသနာမှ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ အဆင်မပြေတာရှိရင် ကွန်မန့်ရေးပေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ Crack နဲ့ patch ဖိုင်တွေကို တော်ယုံနဲ့ ရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် သီးသန့်တင်ပေးတာ နည်းကြပါတယ်။ တော်တော်များများက program နဲ့ ရောပြီးတင်ပေးကြတာများလို့ပါ။ ကို့မှာ ရှိထားတော့ နောက်တစ်ခါ မရှာရတော့ဘူးပေါ့။
Posted by myu shadan at 1:33 PM No comments:
အစိုးရစစ်တပ်ရိက္ခာကား၊ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့်စစ်သားအား KIA ဖမ်းသိမ်း
ကချင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတွင် မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) တို့တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရာ ရိက္ခာကား ၁ စီးနှင့် ကျည်လက်နက်များနှင့် တပ်သား ၂ ဦး သိမ်းဆည်းဖမ်းမိကြောင်း KIA က ပြောသည်။
ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မန်စီမြို့နယ်၊ မုန်းဒိန်ပါရွာ၌ လွန်ခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့ ညနေတွင် ဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲတွင် ရိက္ခာကား ၁ စီး၊ ကျည်ဆံ ၁၀၀၀ ကျော်၊ ဘဇူကာ ၁ လက်၊ MA သေနတ် ၂ လက်နှင့် ဒုတပ်ကြပ် ခင်ဇော်ဦး၊ တပ်သား အောင်ကျော်မှူးတို့အား ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း KIA တပ်ရင်း ၁၂ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး လဘန်ဂျွန်အောင်က ပြောသည်။
တပ်ရင်းမှူး ကျော်သူရ ဦးဆောင်သော ခလရ ၅၆ စစ်အင်အား ၁၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့်စစ်ကြောင်းသည် မုန်းခေါင်စခန်းမှ မုန်းဒိန်ပါရွာသို့ လာရောက်စဉ် KIA တပ်ရင်း ၁၂ ၏ မိုင်းမိပေါက်ကွဲပြီး စတင်ပစ်ခတ်လာ ရာမှ တစ်နာရီခွဲကြာအောင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့သည်။
အစိုးရတပ်မှ ကျဆုံးမှုများလာပြီး အစိုးရတပ်သည် “တပ်လဲလှယ်ရန်လာသော တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း လမ်းမှားပြီး ဝင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ KIA တပ်ရင်း ၁၂ အား ပစ်ခတ်ရန်ဝင်လာခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ အနူးညွှတ်တောင်း ပန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ အစိုးရတပ်မှ တောင်းပန်ခြင်းကြောင့် ညနေ ၅ နာရီခွဲချိန် ခလရ ၅၆ တပ်ရင်းမှူး ကျော်သူရထံ စစ်သုံ့ ပန်း ၂ ဦးနှင့် သေနတ် ၃ လက်ကို ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့ကြောင်း KIA တပ်ရင်း ၁၂ ဗိုလ်မှူး လဘန်ဂျွန်အောင် KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မန်စီမြို့နယ် တပ်ရင်း ၁၂ ရွာများတွင် တပ်စွဲထားသော အစိုးရတပ်သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် ညက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲ သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည်ဖော်သည့် အနေဖြင့် တပ်ဆုတ်ခဲ့ပြီး ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက်နေ့တွင် တဖန်ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မုန်းဒိန်ပါရွာရှိ အစိုးရစစ်ကြောင်းသည် ၂ ရက် ၃ ရက်အကြာတွင် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာမည်ဟု KIA တပ်ရင်း ၁၂ အား ပြောခဲ့သော်လည်း ယခုချိန်ထိ ဆုတ်ခွာခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာ နိုင်ကြောင်း KIA တပ်ရင်း ၁၂ မှ ပြောသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဖက်မှ တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါ။
Posted by myu shadan at 1:32 PM No comments:
Posted by myu shadan at 1:22 PM No comments:
Posted by myu shadan at 1:20 PM No comments:
Posted by myu shadan at 1:19 PM No comments:
ကရင်ပြည်နယ် ဇွဲကပင်တောင်မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ကရင်ပြည်နယ် အတွင်း၌ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသော ပြည်တွင်းပြည်ပ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း တချို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် အစိုးရဆန့်ကျင်မည် ဆိုသည့် အမြင်မျိုးဖြင့် ဆက်ဆံခံရမှုများ ရှိနေကြောင်း Knowledge and Dedication for Nation-building (KDN) အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အထူးသဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး၊ မြေယာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများကို ဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပါက ယင်းသို့ ထင်မြင်ခံရလေ့ရှိကြောင်း KDN အဖွဲ့မှ ဘားအံမြို့ တာဝန်ခံ ဦးစောကျော်ဇွာက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ဘက်က သင်တန်းတွေ ပေးတာမျိုး လုပ်တာမှာလည်း အမြင်မမှားဖို့ လိုတယ်။ တခါတလေ သင်တန်းတွေ ပေးတာကို အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေက ရှိတတ်တယ်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး၊ မြေယာ ကိစ္စတွေမှာ အဲဒီလို အမြင်မျိုး မြင်ခံရတာတွေ ရှိတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ကရင်ပြည်နယ် အတွင်း၌ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသော ပြည်တွင်းပြည်ပ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများအား သီးခြား အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့် မပြုတော့ဟု ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာတွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများမှ သတင်းရရှိသည်။
အစိုးရက ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်သည့် အတွက် အဆိုပါ အဖွဲ့နှင့်သာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
“ခရိုင်ဦးစီးကတော့ အစည်းအဝေးက ပြန်လာပြီး ဒီကိစ္စကို ပြောဆိုနေတာ ကြားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီထုတ် ပြန်စာကို မမြင်ရသေးတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တချို့ကျေးရွာလေးတွေမှာ NGO/INGO တွေအကြား သူ့လုပ်ငန်း၊ ကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ တဖက်နဲ့တဖက် မကျေလည်မှုတွေရှိလို့ ဒီလိုစီစဉ်တာလို့ပဲ သိရတယ်။ သေသေချာချာ ဘာမှ မသိလိုက်ရပါဘူး” ဟု ဘားအံခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဒုဦးစီး ဦးစောဝင်းဂိတ်က ဧရာဝတီသို့ ရှင်းပြသည်။
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီများ၏ ဥက္ကဋ္ဌများသည် ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ဖြစ်နေတတ်ခြင်းကြောင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ရကြောင်း၊ ဒေသခံများအနက် ထိခိုက် နစ်နာ ကြသူများ ဘေးဖယ်ခံ ရနိုင်မည့် အခြေအနေများလည်း ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အစိုးရနှင့် သဘောတူညီမှု စာချုပ် (MOU) လက်မှတ် မထိုးရသေးသည့် KDN အဖွဲ့မှ ဦးစောကျော်ဇွာကပြောသည်။
ထို့အပြင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီမှာ ၅ ဦးဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ ၁၅ ရွာခန့် စုပေါင်းထားသော တချို့နယ်မြေများ၌် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းသွားနိုင်ကြောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စေတနာ မှန်မှန်ဖြင့် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် နိုင်မှသာလျှင် အဆင်ပြေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“နောက်ပြီးတော့ ရွာတရွာမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူငယ် ၅ ဦးစီ ရွေးတာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း မိုးကျရွှေကိုယ်တွေ မဟုတ်ဘဲ ရွာကို တကယ် ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ့်သူတွေ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်” ဟု ဦးစောကျော်ဇွာက ဆိုသည်။
မိမိတို့သည် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အောက်ခြေ ဒေသခံများအထိ ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေခဲ့ရာမှ ယခုကဲ့သို့ အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပေးသည့် အဖွဲ့နှင့်သာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုလျှင် မမျှော်လင့်နိုင် သော အဟန့်အတားများ လည်း တွေ့ရနိုင်ကြောင်း KDN အဖွဲ့မှ ဘားအံမြို့ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါ်မေမရီနာက ပြောသည်။
သို့ရာတွင် လက်ရှိအချိန်အထိ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို မိမိတို့ထံ မရောက်လာသေး သောကြောင့် ယခင်ပုံစံများ အတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေပြီး၊ ထိုသို့ အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းပေးသော သီးခြားအဖွဲ့နှင့် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရမည် ဆိုလျှင် ယင်းအဖွဲ့သည် သီးခြားလွတ်လပ်သော ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း Norwegian Refugee Concil- NRC အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးကလည်း ဆိုသည်။
“ဒီလို လုပ်လိုက်တာကလည်း တချို့ကျေးရွာတွေမှာ NGO/ INGO တွေ စုပြီး ဝင်လာတဲ့အခါ စေတနာမှန်မှန်နဲ့ လုပ်တဲ့လူတွေ ရှိသလို၊ တချို့က ကိုယ့်စီမံကိန်း ပြီးအောင်ဆိုပြီး အဓိကထား လုပ်တာကြောင့် ကော်မတီတွေကြားမှာ အဖုအထစ် လေးတွေ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စေတနာမှန်မှန်နဲ့ လုပ်တဲ့လူတွေမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်လာနိုင်မှာကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ပါတယ်” ဟု KDN အဖွဲ့မှ ဦးစောကျော်ဇွာက ဆိုသည်။
လက်ရှိ NGO/ INGO များ၏ စည်းမျဉ်းများအရ ဒေသခံလူထုနှင့်သာ တိုက်ရိုက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်၍ မရသောကြောင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း တရားဝင် MOU လက်မှတ်ရေးထိုး လုပ်ကိုင်နေသော ဘားအံမြို့ရှိ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သို့ရာတွင် ကရင်ပြည်နယ်၌ အစိုးရနှင့် တရားဝင် MOU လက်မှတ် ရေးထိုးမထားသော အဖွဲ့အစည်း အများအပြားရှိသည့် အတွက် ၎င်းတို့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်တွေ့ ရနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ကျနော်တို့လို အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ဝင်ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုယ်တိုင် ဥပဒေချိုးဖောက် တာပဲ။ ဒါပေမယ့် MOU လက်မှတ် မထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေကလည်း တကယ်တမ်း ပြောရရင် လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းချင်း မတူတဲ့အတွက် အဖုအထစ် ဆိုတာလည်း ရှိနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ခရိုင် ၄ ခရိုင်ရှိပြီး မြို့နယ်ပေါင်း ၇ မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာပေါင်း ၄၀၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။
ကျေးရွာ တရွာလျှင် NGO/ INGO အဖွဲ့ တခုခု၏ စီမံချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်နေသော အဖွဲ့ငယ်လေး ၁ စု အနည်းဆုံး ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
Posted by myu shadan at 1:09 PM No comments:
Posted by myu shadan at 12:04 PM No comments:
ကချင် ဘုံဘာသာစကား သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စ ဆွေးနွေးနေကြာပုံ။ နိုင်ငံတကာရှိ ကချင်အမျိုးသားများအားလုံး အသုံးပြုနိုင်မည့် ဘုံစာပေနှင့် စကားကို ဖော်ထုတ်သွားရေးအတွက် ကချင်အမျိုးသားများ စုဝေးကာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်တွင် Pan Kachin Development Society (PKDS) က ဦးဆောင်ကျင်းပပြီး တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကချင်အမျိုးသားများ စုဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၃၀-၃၁ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္တိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကချင်အမျိုးသားများ အားလုံး နားလည်နိုင်သည့် ဘုံစာပေကို အသုံးပြုလာရန်အချက် (၃) ချက် သဘောတူညီခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အမေရိကန် နှစ်ခြင်းသာသနာပြုဆရာ Rev. Dr. Ola Hanson ပြုလုပ်ထားပေးသည့် အများသုံးနေသည့် ကချင်စာတွင် ပြန်ဖြည့်စွက်ပြီး နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ကချင်အမျိုးသားအားလုံးသုံးနိုင်သည့် စာပေထုတ်ဝေရန်၊ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစာအုပ်ထုတ်ဝေရန် ပညာရှင်ကြီးများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန်နှင့် စာအုပ်ထုတ်လုပ်မှုကို Pan Kachin Development Society (PKDS) တာဝန်ယူသွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ ကချင်စာပေနှင့် ယာဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့များ၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့မှ ကချင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (JLH) ခေါင်းဆောင်များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးရှိ ကချင်အမျိုးသားများ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယခုဆွေးနွေးပွဲသည် ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNO) ခေါင်းဆောင် ဒူဝါဘောမ်ဝမ်လရော် (Duwa Bawmwang Laraw) နှင့် Pan Kachin Development Society (PKDS) ဥက္ကဌ ဒူဝါ အင်ဆန်တူးအောင် (Duwa Nsang Tu Awng) ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုစာအုပ်ထုတ်ဝေရန် စာပေ ပညာရှင်ကြီးများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် Technical Team ရုံးများဖွင့်လှစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကချင် မျိုးနွယ်စုများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံများတွင် ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၉ သိန်းကျော်၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁ သိန်းခွဲနှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ အရူနာချာပရာဒက်ရ်ှနှင့် နာဂလင်း ပြည်နယ်များ တွင် ၅ သောင်းခန့်နေထိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။
Posted by myu shadan at 10:44 PM No comments:
Posted by myu shadan at 10:27 PM No comments: